Supercell anoisa mari mukugadzira mitambo yeApple Watch | Ndinobva mac
Iyo Apple Watch iri, pasina mubvunzo, chimwe chezvinhu zvinodikanwa zvevanhu vazhinji, sezvo iri inonakidza kupfeka, nekuti kunyangwe yakatanga seyemubatsiri kune iyo iPhone, zvishoma nezvishoma yakachinja, kusvika padanho rekuti izvozvi , pazviitiko zvakawanda, unogona kuishandisa chaizvo sechinotsiva icho (kunyangwe zviine zvikwanisiro, hongu).
Nekudaro, chokwadi ndechekuti chishandiso ichi chirikushaya mamwe maficha anonakidza, uye chikamu chatinoona zvisingaite chiri mumitambo, sevazhinji vanogadzira havazvione zvichibatsira zvachose. Imhaka yeizvozvo, kubva kuna Supercell, vafunga kutora mukana uye kutanga kuisa mari mukusimudzira mutambo yemhando idzi dzemidziyo.
Supercell anoisa mari mukugadzira mitambo yeApple Watch
Sezvo isu takakwanisa kuziva, nguva pfupi yadarika kubva kuSupercell, vagadziri vewazhinji mitambo yeIOS uye Android senge Clash of Clans kana Clash Royale, vafunga gadzira kambani-diki, iyo yavanotungamira mukugadzira mitambo yeApple Watch, pamwe nemamwe mawadhi akangwara, kuyedza kutora mukana nazvo.
Kunyanya, uku kupatsanuka kutsva inonzi Yese Hembe Mitambo, uye mariri havana kudyara chimwe chinhu uye hapana chakaderera mamirioni mashanu emauro, Kuti utange nekuvandudza mitambo yakapusa. Zvino, chisingazivikanwe zvachose ndiyo modhi yekuwana mari yavanoshandisa, sezvo mitambo yemamwe masisitimu anoshanda anotarisa, pamusoro pezvose, mukutenga kwemukati, uye mune ino kifaa, zvirinani izvozvi, icho chinhu chakanyanya kuomarara, kunyangwe tichizozviona izvo zvishoma nezvishoma.
Parizvino, ivo havana kuburitsa chero chinhu kumusika parizvino, kubvira ivo vachangotanga, asi zvinotarisirwa kuti, zvishoma nezvishoma, ivo vanozoonekwa mune yekushandisa chitoro chechigadzirwa ichi, uye vachifunga nezvekubudirira kwavakaita pane mamwe mapuratifomu, zvinonyanya kuitika kuti vanozovewo vanozivikanwa pano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Vagadziri veClash of Clans uye Clash Royale vanoita mari mumitambo yeApple Watch
Mako MacBook's USB-C madoko ari kupfupika here? Iwe ikozvino une maSatechi hub adapters akaderedzwa paAmazon
Kugadzirisa neiyo T2 chip, Spotify yeApple Watch uye nezvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac